Wararkii ugu Danbeeyey ee Weerarada Barcelona iyo Cambrils ee Dalka Isbayn (Spain) – Radio Daljir
Wararkii ugu Danbeeyey ee Weerarada Barcelona iyo Cambrils ee Dalka Isbayn (Spain)
Agoosto 18, 2017 2:53 b 0
Weerarkii argagixisada ee Barcelona waxaa ka danbeeyey weerar kale oo lagu qaaday magaalada xeebta ee Cambrils ee loo dalxiis tago, waxaa weerarkaas asna loo isticmaalay gaari faan ah. Booliska Cabmrils ayaa laga soo xigtay in weerarkaas laga hortagay, lana dilay 4 nin, mid shanaad asna waa la dhaawacay, gacantaana lagu hayaa.
Ninka la qabtay iyo kuwa la dilay ayaa xirnaa suumanka ismiidaaminta, sida laga soo xigtay booliska magaalada.
Weerarka magaaladaCambrils oo saaka oo Jimce ah (saqda dhexe) dhacay, waxaa gaariga la jiirsiiyey, laguna dhaawacay 7 qof oo boolis ku jiro.
Dhanka Barcelona, weerarkii Khamiistii shalay waxaa illaa hadda la soo warinayaa in dhimashadu marayso 13, dhaawucuna kor u dhaafay 100.
Raysal Wasaaraha Spain, Mariano Rajoy, waxa uu shaaciyey in weeraradu yihiin argagixiso, lalana beegtay shacab dambi-laawayaal ah.
Ciidamada ammaanka ayaa hadda weerarada Barcelona iyo Cambrils waxa ay la xiriirinayaa qarax Arbacadii ka dhacay guri ku yaal magaalada Alcanar, uuna ku dhintay hal qof. Booliska magaalada ayaa hadda tilmaamaya in guriga lagu diyaarinayey waxyaalaha qarxa.
Wararkii ugu danbeeyey ee Barcelona waxa kale oo ay sheegayaan in Driss Oubakir oo ka soojeeda Marooko uu noolyahay, uuna booliska isu soo dhiibay. Driss ayaa sheegay in qofka shalay la dilay uusan asaga ahayn, ee uu yahay qof aqoonigiisa xaday, kuna ijaartay gaariga loo isticmaalay weerarka Barcelona.
Weli lama hayo darawalkii gaariga faanka ah ku weeraray farasmagaalaha Barcelona ee Las Rambalas.
Driss Oubakir (masawirka kore) Farasmagaalaha Las Rambalas, Barcelona
Siyaasadda & Dhaqaalaha 501 Wararka 26101
Wasiir Yariisow,”Dalxiisayaal u Dhashay Shiinaha Ayaa Ku Sugnaa Muqdisho”